TDS ဘိုးအင်း 787-800 RR, Mega Pack ကို DOWNLOAD FSX & P3D - Rikoooo
TDS ဘိုးအင်း 787, Mega Pack ကို FSX & P3D
အရွယ် 436 ကို MB
downloads ရယူရန္ 164 768
Author: ricardo_tv နဲ့ Chris အီဗန်တည်းဖြတ် Tenkuu Developers စတူဒီယို။ , G Munro အားဖြင့် 787 2d panel က။ Alejandro Rojas Lucena အားဖြင့် VC ကိုပြုပြင်မွမ်းမံ။ Rikoooo အားဖြင့် Repack, ပြင်ဆင်ခြင်းများနှင့်မွမ်းမံမှုများ
သီးသန့်! အတူဘိုးအင်း 787 မိသားစု, Mega-pack ကို 82 repaintsများအတွက်ကမ္ဘာကြီးထဲမှာဖြစ်ကောင်းအကောင်းဆုံးကိုအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဗူး FSX နှင့် P3D။ ခြောက်လမော်ဒယ်များ (787-787RR နှင့် GEnx, 800-787RR နှင့် GEnx, 900-787RR နှင့် GEnx) ၏တစျခုလုံးကိုဘိုးအင်း 10 မိသားစုတို့ပါဝင်သည်။
ဤသည်အထုပ်နှစ်ခုဗားရှင်းပါဝင်သည်။ , G Munro သို့မဟုတ်၏ B2 ၏ default အနေနဲ့ဗားရှင်းဖြစ်သောကို virtual cockpit / 787D panel ကိုနှင့်အတူအခြား version ကိုအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအစစ်အမှန်ဘိုးအင်း2များ၏တဦးတည်းကြောင်းတစ်ခုသာ 737D panel ကိုအတူတစ်ဦးကဗားရှင်း FSX ဒါပေမယ့်တိုးတက်နှင့်ဘိုးအင်း 787 (အသစ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအသစ် gauge စသည်တို့) ကိုအဆင်ပြေအောင်ဒါဟာသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုလုပ်, သင်မှတက်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးဗားရှင်းထိပ်တန်းရှိပါတယ်။ အဆိုပါအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဗားရှင်း3ကို virtual cockpit တစ် 787D မော်ဒယ်သေးမရှိသတိပြုပါ။
အလုပ်လုပ် FMC, GPWS အသစ် GPS စနစ် 787, မြေပြင် animations တွေကို, ထုံးစံ RR သို့မဟုတ် GEnx အမျိုးအစားအင်ဂျင်အပေါ်အခြေခံပြီးအသံ Pushback, V-မြန်နှုန်းနှင့်ပိုပြီး: အားလုံးဗားရှင်းတွေနဲ့လည်းပါဝင်သည်။ မြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်အသေးစိတ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတို့ပါဝင်သည်။ အတူ 100% သဟဇာတ Prepar3D v4 နှင့် FSXEdition ကို -Steam ။
ထို့အပြင်၎င်း၏အမည်ပြောင် Dreamliner အားဖြင့်လူသိများအဆိုပါဘိုးအင်း 787, ရှည်-တစီးကိုလေယာဉ်များဖြစ်ပါသည်။ တရားဝင်မေလ 26 အတွက်ဝဘို့ဧပြီလ 2004, 2008 အပေါ်ဖြန့်ချိပါကဒီဇင်ဘာလ 15, 2009 အပေါ်၎င်း၏ပထမဆုံးလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုသြဂုတ်လ 26, 2011 အပေါ်အသိအမှတ်ပြုသည်။ ပထမဦးဆုံးပေးပို့ All Nippon Airways ကမှစက်တင်ဘာလ 26, 2011 အပေါ်ရာအရပျကိုယူ။
ဤသည်လေယာဉ်တင်ဗားရှင်းနဲ့ configurations ပေါ် မူတည်. 210 နှင့် 330 ခရီးသည်အကြားသယ်ဆောင်နှင့်ပိုပြီးလောင်စာ-အကျိုးရှိစွာဖြစ်ပါသည်: ဘိုးအင်း၏ကနဦးအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များအရသိရသည်လောင်စာသုံးစွဲမှုအနေနဲ့အဲယားဘတ်စ် A20 သို့မဟုတ်ဘိုးအင်း 330 ၏ထက် 777% နိမ့်သည်။ (ဝီကီပီးဒီးယား)
All Nippon Airways က
Air ကိုကနေဒါ ARP
Air လေကြောင်းလိုင်း Transat
အဘိဓါန် Hawaiian လေကြောင်းလိုင်း
Xiamen Air လေကြောင်းလိုင်း
အိုမန် Air လေကြောင်းလိုင်း
Air ကို Caledonie Intl
air Asia လေကြောင်းလိုင်း
ဗားရှင်း 1: 2D panel ကို 787:
ဗားရှင်း 2: Virtual ယာဉ် / 2D panel က: